Caqliyadda Argagixisada W/Q: Hassan Abdı Hassan - Tilmaan Media
Caqliyadda Argagixisada W/Q: Hassan Abdı Hassan
Taariikh iyo Ujeeddo
Dad badan baa isku raacay in argagaxisadu ay tahay balada qarnigan aan ku jirno. Argagixisonimada iyo qeexiddeeda dhabta ah aad baa loogu kala aragti duwan yahay. Baaxadda falalka argagixisonimo iyo koobistoodaba weli heshiin kama aysan gaarin aqoonyahannada siyaasadda, xeeldheerayaasha arrimaha difaaca iyo ammaanka iyo hay’adaha la dagaallanka argagixisadaba. Qeexid kasta oo argagixisonimada la xiriirta waxaa saameeya aragtida siyaasadeed ee qofka, waxa uu aaminsan yahay, ujeedka falalka lagu tiriyey in ay argagixisonimo la xiriiraan iyo dhinaca uu ka taagan yahay loollannada siyaasadeed ee dunida ka jira. Qormadan kooban waxaa lagu lafaguri doonaa ujeedka argagixisonimada, nafsiyadda (Saaykolojiyada) argagixiyeyaasha, jaadadka falalka argagixisonimo iyo dawladaha iyo “la dagaallanka argagixisada”.
Sida laga dheehan karo taariikhda, falalka argagixisonimo, wuxuu adeegsigoodu aad u badan yahay marka ay jiraan loollano siyaasadeed iyo dagaallo u dhexeeya laba kooxood ama in ka badan oo aan awoodahooda iyo cududdooda ciidan aysan isu dhigmin sida dagaallada u dhexeeya dawladaha iyo fallaagooyinka talintooda ka soo horjeeda amaba xooggag qalaad oo dal ku soo duulay iyo kooxaha iska-caabbinta ee la dagaallamaya. Dagaallada noocan ahi waa waxa ay dadka ku xeeldheer arrimaha gaashaandhiggu afka qalaad ku yiraahdaan ‘Asymmetric Warfare’. Maadaama guusha dagaalka aysan ku xirneyn keliya cududda mileteri ee dagaalka ku lugta leh, kooxaha laga taagta roon yahay waxay adeegsadaan xeelado dagaal sida weeraro gaadmo ah oo ku-dhufoo-ka-dhaqaaq ah, afduubyo, qaraxyo, dilal abaabulan, is miidaamin iwm. Loollanka guusha ayaa waxa uu noqonayaa ujeedka koowaad ee falal badan oo argagixisonimo ah.
Ururkii ugu horreeyey dunida ee adeegsada xeeladaha argagaxisonimada casriga ah wuxuu ahaa dagaalyahannadii Yahuudda “Zealots of Judea” ee lagu magacaabi jiray “Sicarii” oo macnaheedu ahaa “raggii billaaweyaasha sitay”. Ururkan iyo xubnihiisaba waxa ay ka soo hor jeedeen xooggaggii boqortooyadii Roomaanka ee dhulalka ay ku nool yihiin ka talinaysay. Waxay dilal qarsoodi ah ku fulin jireen madaxda iyo ciidamada Roomaanka ah iyo ciddii kale ee la shaqaysa. Waxa ay aaminsanaayeen inta Roomaanku ay dhulkooda joogaan in aysan Yahuud daacad ah ahaan karin. Dantooda waxa ay ahayd abuurid xaalad cabsi iyo baqdin gelinta xoogaggii Roomaanka iyo qolo walba oo wada shaqeyni ka dhexeyso.
Sanadihii 66-70 kii Ciise dabadii, dagaalyahannadaasi waxa ay qeyb libaax leh ka qaateen kacdoonnadii looga soo hor jeeday guutadii 10-aad ee xoogagga Roomaanka kuwaasoo hareereeyey Qalcaddii ‘Masada’ oo ahayd meelihii ugu dambeeyey oo ay gabbaad ka dhigteen dagaalyahannadaasi iyo taageerayaashoodaba. Markii la go’doomiyey qalcaddaasi muddo labo sano ah ayaa ugu dambeyn dagaalyahannadaasi sanadkii 73-kii ay dhammaantood is dileen halkii ay iska dhiibi lahaayeen. Waxaa ka badbaaday labo hablood iyo shan caruur ah oo ku dhuuntay kanaalka biyaha ee qalacadda, ayaa noqday dadkii soo tebiyey wixii halkaa ka dhacay maalinkaas.
Ururada argagixisonimo ee taariikhda dunida soo maray waa ka mid ah “Xashaashiyiin” oo badanaa qoraallada Ingiriisiga ku qoran looga yaqaan “The Assassins” oo uu abaabulay wadaad diimeed Shiici ah oo lagu magacaabi jiray Xasan Sabbaax qarnigii 11-aad. Kooxdani ayaa waxa ay ka soo hor jeedday dawladdii Saljuuqiyiinta ee xilligaa jirtay, waxa ayna fulin jirtay shirqool dilal ah oo lagu beegsanayo madaxda iyo ragga magacyada leh ee maamulkii ay ka soo horjeedeen. Dilalka ay fuliyaan ayaa waxaa ay badanaa ka dhici jireen meelaha bulshada isugu timaaddo sida suuqyada si ay u abuuraan argagax joogto ah oo dadkuna baqdin u dareemo ugana fogaadaan dawladda iyo la shaqeynteeda.
Xashaashiyiinta waxa ay u sameysneyd qaabdhismeedka haramka “pyramid” oo kale. Qeybta u sarraysa ‘figta’ waxaa fadhiya hoggaamiyaha kooxda oo loogu yeero Wadaadka Buurta “Sheykh Al-Jabal”, waxaa ku xiga kala sarraynta dacwad fidiyeyaasha “Daaciyiin” oo ah kuwa qaabilsan baahinta aragtida kooxda iyo soo jiidashada xubnaha cusub ee kooxda. Qeybta dhexe ee haramka waxaa fadhiya naftii-hureyaaasha “Fidaa’iyiin” oo ah qolyaha fuliya falalka dilalka ah ee qorsheysan. Waxa ay diyaar u yihiin in ay u dhintaan fulinta hawlaha loo igmado. Waxaa qaab-dhismeedka u hooseeya oo salka haramka ahna waxaa fadhiya xubnaha cusub ee kooxda oo weli tababarku u socdo oo loogu yeeri jiray “rafiiqiin”. Sidani ayuu Xasan Sabbaax u dhisay mid ka mid ah kooxihii ugu halista badnaa ee taaariikhda argagixisada.
Sida magacoodaba laga garan karo xubnaha Xashaashiyiinta waxaa lagu eedeyn jiray in ay aad u isticmaali jireen maandooriyaha xashiishka. Qoraallada taariikhiga qaarkood ayaa sheegaya in Sabbaax uu lahaa beer aad u qurux badan oo miro iyo khudaar kala kaan ah laga helo halkaas oo ay joogeen hablo quruxsan. Beertaasi ayaa waxaa la geyn jiray naftii-hureyaasha inta aanan hawlgal loo dirin iyagoo xashiish cabsan si loogu diyaariyo hawlaha adag ee ay wajahayaan. Sidoo kale, magacooda waxaa lala xiriiriyaa inuu ka yimid “Al Asaasiyiyiin” oo leh macnayaasha ‘aasaas, saldhig, billow, tiir’. Sida ka muuqata aragtidan dambe, magacooda waxa uu u yara eg yahay macno ahaan kii “Al-Qaacida”.
Sida uu ku sheegey taariikh yahanka Bernad Lewis buuggiisa “The Assassins: A Radical Sect in Islam” xashaashiyiintu dilalkoodu waxa ay ku saleysnaayeen keliya danaha siyaasadeed ee ay lahaayeen. Sidaa daraaddeed muuqaallo fara badan oo ururo argagixiso ay leeyihiin ayaa dadka sirmi karaa oo malaysiin kara in ay matalayaan diin gaar. Hase ahaatee adeegsiga diinta ee qolyaha argagixisada ayaa waxa uu yahay keliya qalab dacaayadeed iyo xeelad borobogaando oo ay dadka ku kasbadaan. Xashaashiyiintu waxa ay caan ku ahaayeen in ay shirqoollada iyo dilka shakhsiyaadka ay u adeegsan jireen awood siyaasadeed oo ay ku majaxaabiyaan maamulladii ay la loollamayeen.
Markii ugu horreysey ee ereyga “terrorism/argagixisonimo” uu si rasmi ah u soo galay taxanaha taariikhda siyaasadda dunida waxa ay ahayd abbaarihii Kacdoonkii Faransiiska, xilligaas oo koox loo yaqaanay Jacobins ay la wareegeen xukunka dalkaas. Kooxdani oo xilligii ay talada haysay loogu yeeri jiray taliskii argaggaxa ‘Reign of Terror’ ayaa waxay gacan bir ah ku maamulaysay dalka Faransiiska. Waxa ay si xooggan u cadaadisay una cabburisa cid kasta oo ka soo hor jeedsatay kacdoonkii ay iyadu wadday. Muddadii uu jiray taliskii argaggaxa oo ka yarayd sanad ayaa waxaa la dilay 17,000 (toddoba iyo toban kun) oo qof, halka tiro tabaneeyo kun ahna ay xabsiyada si dandarro ah ugu dhinteen iyaga oo aan wax maxkamad ah la soo taagin.
Bare sare Randy Borum oo Jaamacadda South Florida wax ka dhiga ayaa buuggiisa “Psychology of Terrorism” ku qeexay Argagixisonimadu in ay tahay “falal ama rabshado cadawtooyo oo si bareer ah loogu beegsanayo da d rayid ah -oo aan dagaal ku lug laheyn- si loo xaqiijiyo afkaar diimeed, aydiyoolojiyo gaar ah, amaba dano siyaasadeed“. Dadka qaarkood baa ku kooba argagixisonimada adeegsiga xoogga ee urur aan dawli aheyn si uu u baqdin geliyo qolyaha uu beegsanayo iyadoo ujeedka ugu weyn uu yahay kasbashada taageero dadweyne iyo in cadowgooda si jujuub ah ku liqsiiyaan dalabaadkooda iyo doonistooda.
Qormo lagu daabacay Encyclopedia Britannica oo cinwaankeedu ahaa “Terrorism” ayaa argagixisonimada ku sheegtay “adeegsiga joogtada ah ee xoogga iyo qalalaasaha si loo abuuro xaalad baqdin bulshada dhexdeeda ah iyada oo la doonayo meel marinta ujeeddooyin siyaasadeed oo gaar ah. In kastoo billowgii falalka argagixiso ay ahaayeen kuwo ka imaanayay dhanka dawladda, wixii ka dambeeyey qarnigii 20-aad falalka argagixisonimo waxaa loo aqoonsaday kuwa qolyo gaar ahi ay kaga soo hor jeedaan dawlad gaar ah. Argagixisonimadu waa fal ujeedkiisu yahay abuuridda qalqal iyo xasillooni darro bulshada dhexdeeda laguna beegsanayo dadweynaha ha ka yimaado dhinac dawladeed ama ururro ama shakhsiyaaad caadi ah.
Sida uu ku sheegay Randy Borum buuggiisa “Psychology of Terrorism” daraasadihii ugu horeeyey ee la xiriiray falalka argagixisonimo waxay xoogga saareen falanqeynta sababaha keena rabshadaha cadawtinimo ee aadanaha. Sigmun Freud oo caan ku ah daraasadaha cilmu nafsiga ayaa qaba in xadgudubka iyo colaadintu ay yihiin dareen fidri ah oo ku beeran aadanaha oo sii kordhi kara inta noloshiisa jirto. Freud wuxuu sheegay in aadanuhu uu leeyahay tamarta nolosha “eros” iyo awoodda geerida “thanatos” oo u baahan mar kasta in la isku dheellitiro. rabshadaha cadawtooyonimo waxay ka dhashaan marka qofku awooddii geerida uu ku bixiyo dadka kale.
Mid ka mid ah aragtiyaha ugu hadal heynta badan 50-kii sano ee ug dambeeyey ee cilmu nafsiga waxay sheegeysaa in caalwaagu “frustration” iyo niyad jabku ay sabab u noqon karaan in qofku la yimaado qalalaase iyo falal cadawtooyo oo argagixin iyo waxyeelleyn kara dadka uu la nool yahay. Dadku dabeecaddoodu waxa ay ku jaangooyaan oo u qaabeeyaan si waafaqsan xaaladda hortooda taalla. Qofku cadaawadda iyo soo dhaweyntiisa ku aaddan arrin waxaa saameyn ku leh fekradda hore ee uu ka qabo arrinka. In qofku qalalaase iyo dhiillo joogto ah la yimaado waxaa badanaa u sabab ah inuusan laheyn karti uu is afgaran waayada si nabad ah ku xalliyo ama kalsoonida uu ku qabo naftiisa iyo xirfaddiisa oo hooseysa.
Sidaas daraaddeed falalka argagixisada waxaa saldhig u ah aragtida qofeed iyo fekradda ay ka qaataan xaaladaha siyaasadeed ee deegaannada ay ku nool yihiin, halkii ay si aan janjeer iyo eex laheyn u fiirin lahaayeen duruufaha ku hareereysan. Aragtiyahoodaas badanaa waxay ku miiraan waxyaabaha ay aaminsan yihiin, khibraddooda iyo xusuustooda. Cilmi baaris badan oo ay sameeyeen aqoonyahanno ku xeeldheer dabeecadda aadanaha ayaa argagixisonimada la xiriiriyey naarsiisam-ka iyagoo tibaaxay in qofku naarsiistiga ah uu qiimaha naftiisa ay leedahay ay kala weyn tahay qiimaha nolosha dadka kale oo dhan. Arrintani ayaa waxa ay qiil u yeeleysaa in si qofku ujeeddooyinkiisa siyaasadeed uu u gaaro inuu halaago inta isaga ka soo hartay oo idil.
Aragtiyo cilmiyeedyada qaarkood baa soo jeediyey in cunfiga iyo argagixisonimada ay xiriir la leedahay cillad ka jirta shakhsiyadda qofka (personality disorder). Dadka falalka argaggixisonimada ku kaca badankood waxa ay soo mareen nolol adag iyo qoysas burbur ah oo aan si fiican u shaqeyneyn. Cadaawada ay caruurnimadooda ku soo barbaareen ayaa sababysa in ay la yimaadaan naceyb iyo fallaagonimo ku aaddan dadka kale. Su’aalaha badanaa la is weydiiyo marka laga hadlayo argagixisonimada ayaa waxaa ka mid ah sababta dhallinyaro fara badan oo u muuqda in ay qoysas xasilloon oo nolol wanaagsan ku nool ay ugu biiraan ururada argagixisada. Waxaana loo aaneeyey baahida uu qofku u qabo in uu ‘waxqabad’ la yimaado iyo in uu helo koox ama cid uu ka tirsan yahay taasoo siinaysa aqoonsi iyo qanaaco. Sida uu qabo rug caddaaga cilmu nagsiga ee Abraham Moslow baahida nafeed ee aqoonsiga iyo meel ka tirsanaansaha waa baahiyaha uu banii’aadanku qabo oo lagama maarmaan ah in la haqab-tiro.
Cilmi baaris ay samaysay Jaamacadda Maryland ee dalka Maraykanka oo cinwaankeedu ahaa “Psychology of Terrorism: ‘Syndrome’ Versus ‘Tool’ Perspective” ayaa argagixisonimada ka eegtay laba dhinac oo kale ah in argagixisonimadu tahay astaan nafsiyadeed oo la xiriiri karta faya qabka maanka qofka iyo aalad dagaal oo loo adeegsanayo ka guul gaaridda loollanka ay ku jiraan kooxaha falalka argagixiso ku kacaya. Marka laga eegayo dhanka astaamaha qofeed ee xubnaha argagixisada ayaa waxaa la baaraa xaaladaha bulshadeed ee qofka sida saboolnimada, qoyska waxbarasho la’aanta, cadaadis siyaasadeed iwm, iyada oo ujeeddadu tahay in la kala sooci karo qofka argagixiyaha ah iyo qofka caadiga ah.
Dhanka kale, agagixisanimadu waxaa loo arki karaa ‘aalad’ iska caabbin oo loo adeegsado ka guul gaaridda halgannada ay qeybaha ka yihiin qolyaha argagixisada ah. Halkan cilmi nafsiga argagixisada waxa uu baaraa yoolka ay hiigsanayaan qolyaha argagixisada iyo dhabbaha ay u marayaan. Halkani, falka argagixiso waxa uu noqonayaa ‘xeelad dagaal’ oo lagu xaqiijinayo danaha siyaasadeed ee ururadu ay leeyihiin. Waxaa halkan laga dheehan karaa aragtidii “Machiavelli” ee nuxurkeedu ahaa dhabbo kasta oo aad danahaaga ku xaqiijin kartaa way bannaan tahay. Sidaa darteed, argagixisonimada waa aalad dagaal sida qoriga iyo taangiga oo kale ah oo loo adeegsado majaxaabinta cadowga iyo gaaridda guusha.
Jaadadka Falalka Argagixisada
Sida uu Robert Pabe, oo bare cilmiga siyaasadda ka ah Jaamacadda Chicago, ku sheegay buuggiisa “Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism” waxaa jira habab argagixisonimo oo kala kaan ah sida argagixiso bandhigeed “demonstrative terrorism” oo ujeedkeedu yahay in qadiyadda ay qolada falalka argagixisonimo ku kacaya ay dacaayad hesho oo dad badan gaarto si ay dad cusub u soo jiitaan oo uraradooda ku soo biira iyo in ay toosh ku iftiimayaa waxa ay cabashadooda tahay. Argagixisada noocan ahi waxa ay u dan leedahay in dacaayadda hawlahooda la gaarsiiyo tirada ugu badan ee dad ah iyadoo aan ahmiyad badan la siineyn tirada dhimashada la geysanayo. Ururada falalka noocaas ah oo kale fuliyey waxaa ka mid ah dagaalyahannadii North Ireland ee loo yaqiin “Orange Volunteers”. Waxaa kale oo jira agagixiso burburineed “Distructive Terrorism” oo ah mid ka xoog iyo waxyeello badan tii hore loogana golleeyahay in cadawga sida ugu daran ee suurta galka in loo waxyeelleeyo, kashaare ba’an la gaarsiiyo oo xanuun la dareensiiyo. Qolyaha hababkan adeegsada waxaa ka mid ah Jabhaddii Colombia ka dagaallamaysay ee “FARC”.
Ismiidaaminta “suicide attacks” oo ah habka ugu badan oo falalka argagixisada casrigan aan joogno loo fuliyo ayaa waxaa loo aaneeyey dhowr sababood. Sababta koowaad ismiidaamintu kooxaha argagixisada waxay ay u tahay hab ay u xambaarsan tahay ujeeddo sare oo badanaa la xiriirta caqiiddo diimeed. Waxaana tusaale u ah ismiidaaminta ugu badan ee ay sameeyaan kooxaha argagixisada ee diimaha haysta sida Islaamka kuwaasoo aaminsan falka ay samaynayaan natiijadiisa in ay janno ku helayaan. Sababta labaad, ismiidaamintu waa hab fudud oo khasaareheedu xaddidan yahay oo cadawga lagu waxyeelleeyo. Arrintani waxaa loo tusaaleyn karaa jabhado hubeysan oo falal is miidaamin ah fuliya oo aan ujeeddo diimeed laheyn sida Tamil Tigers-ka.
Aqoonyahannada cilmiga bulshada ee ka hadla isdilidda ‘suicide’ waxaa u horreeyey uguna caansan Emile Durkheim. Buuggiisii caanka ahaa ee ‘Suicide’ waxa uu ku iftiimiyey waxyaabaha horseeda is dilka. Wuxuu xoogga saaray astaamo bulshadeedka doorka weyn ka cayaara in qof naftiisa gooyo oo ay ka mid yihiin cadaadiska reeraha iyo bulshada, caruur la’aanta, lammaane la’aanta, saxmadda iyo buuqa nolosha magaalooyinka, sara kaca heerarka nolosha, xanuun jir ahaaneed oo daran iyo isku dhexyaac dhanka maanka ah. Quus iyo caalwaa’ la xiririira culeyska nolosha iyo dhibteeda ayuu ku dooday in ay sababaan falalka is dilidda ah ee bulshooyinkii uu baaray Durkheim. In kastoo isdilka uu ka hadlayay Durkheim aysan la xiriirin ismiidaaminta casriga ah, haddana waxaa aqoonyahannada qaarkood ku doodaan in ay wax badan wadaagaan.
Argagixisadu nooc kasta oo ay ahaataba kummanaan baa noloshooda ku waaya sanad walba. Kaydka macluumaadka ee Mashruuca Chicago ee Amniga iyo La Dagaallanka Argagixisada oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano “CPOST” ayaa wuxuu ururiyey tirada falalka ismiidaaminta ah ee 1982 illaa 2016-ka ee ka dhacay dunida ku qiyaasay 5,292 weerar oo ka kala dhacay in ka badan 40 dal. Soomaaliya haddii aan si madax bannaan u eegno intii ka dambaysay 2006-dii waxaa ka dhacay 117 weerar ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen tiro gaaraysa 1,029 qof halka mid taas ka badanina ay ku dhaawacmeen. Celcelis weerar kasta waxaa ku naf waayay 9 qof.
Dawladaha iyo La Dagaallanka Argagixisada
Qarnigii 20-aad ee tagay iyo qarnigan cusub ee ku caan baxay adeegsigga siyaasadaha danaystenimada “Opportunistic Politics” ayaa waxaa soo baxday in dawlado fara badan ay ku lug lahaadaan kooxo argagixiso iyo fallaagooyin talada dawladahooda ka soo hor jeeda. Arrintan ayaa keentay in mugdi badan soo galo qeexidda ‘argagixisonimada’ ee dhinacyada loollamada siyaasadeed ku jira. Siday doonto ha noqotee, argagixisonimadu waxa ay noqotay halbeeg dawladaha taagta leh ay samaysteen oo hadba ciddii ay rabaan in ay maagaan ay ku calaamadiyaan. Bare wax ka dhiga Jaamacadda Melbourn ayaa si maad leh u yiri “Inaad bambo dad ku tuurto waa wax xun oo argagixisonimo ah, haddii aad dusha diyaarado bambooyin kaga soo duqaysana waa hawlgallo fiican!”
Tan iyo aasaaskii ‘Midowga Ummadaha’, golayaasha Qaramada Midoobay waxay ku guuldarraysteen in ay soo saaraan qeexid la xiriirta ‘argagixisonimada’ oo la isku raacsan yahay. Argagixisonimadu waa xeelad dagaal oo dawladuhu marka ay iyagu adeegsanayaan ay la wacan tahay, halka marka cadowgoodu adeegsado uu noqonayo ‘argagixiye’ nabadda adduunka iyo amniga aadanahaba halis ku ah. Sidaas daraaddeed bay caan u noqotay oraahda ah ‘Nin argagixisadii waa nin kale xorriyad-u-dirirkii’. Siyaasadaha is diiddan ayaa hadba waxa ay ‘argagixiso’ ku calaamadiyaan cidda danahooda ka soo hor jeeda. Dawladaha xoog weynayaasha ah sida Maraykana ayaa noqdeen meelaha laga soo saaro magacyada argagixisada.
Intii ka dambaysay 11-ka Sebteembar, warbaahinta reer galbeedka ayaa waxay ay, si aan ka labalabeyn laheyn, argagixiso ku sheegaan fal kasta oo qofka geystaahi uu heyb islaam ah leeyahay. Dawladda Maraykanku waxa ay taageertaa xooggaga Kurdida ee la dagaallama dawladda Suuriya ee Bashaar Al-Asad uu hoggaamiyo. Waxaa ka mid ah xooggagaas Xisbiga Shaqaalaha Kurdiyiinta ‘PKK’, Dhaqdhaqaaqa Difaaca Dadka ‘YPG’ iyo Xisbiga Midowga Dimuqraadiyiinta ‘PYD’ oo Maraykanku xoogag iska caabbin u arko, halka dawladda Turkiguna ay ururo argagixiso uga diiwaangashan yihiin.
Maadaama aan xeer ‘argagixisonimada’ xaddida oo si cad u qeexa jirin, ayaa waxay dhalisay in dawladuhu ku kacaan falal banii’aadannimada ka soo hor jeeda oo haddana cidina argagixiso ugu yeerin maadaama fal dawladeed uu yahay. Gummaadka dawladda Shiinaha ay ku hayso muslimiinta Uygur-ka, duqeymaha Israa’iil ee marasta reer Falastiin, weerarada Ruushka ee Kirimeeya iyo dhacdooyin badanoo la mid ah oo dawlado ku kaceen ayaa waxaa ku waxyeellooba kumanaan wax ma galabsato ah hase yeeshee cidna falal argagixiso uma aragto! Maadaama dawladuhu xoogga waaweyn ay iyaga dunida u arrimiyaan waxa ay samaysteen ereybixinno qurux badan oo lagu daboollo dembiyada ay geystaan askartooda sida “collateral damagae”, iyo “necessary loss” iwm oo ay ku cabbiraan khasaaraha ay geystaan si ay danahooda u gaaraan.
Haddii aan Soomaaliya il gaar ah ku eegno, dawladda Soomaaliya, ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka iyo dawladda Maraykankaba iyagoo ku doodaya magaca la dagaallanka argagixisada ayaa waxay sababeen khasaaro badan oo naf iyo maalba leh oo loo geystay shacab aan waxba galabsan. La dagaallanka argagixisada ayaa waxa uu noqday cudurdaar lagu daboolo dilalka iyo duqeymaha aan kala sooca laheyn ee ay sababaan inta lagu guda jiro hawlgallada lagula dagaallamayo kooxaha argagixisada ah. Sannad walba hay’ado caalami ah sida Amnesty International ayaa soo saara warbixinno ku salaysan dilal, boob iyo kufsi ay geestaan xoogagga dawladda, maleeshiyaadka la socda iyo ciidama AMISOM.
Gebagabdii, sabab kasta ha loo aaneeyee, falalka argagixisada oo ay u horayso ismiidaamintu ma laha ujeeddo diimeed. Cilmi baaris lagu sameeyey falalkii argagixisonimo ee u dhexeeyey 1980 illaa 2003 dii ayaa waxaa lagu gaaray natiijo ah in ismiidaamintu aysan la xiriirin diin. Ku dhowaad 90% falalka ismiidaaminta waxaa looga soo horjeeday xoogag soo galooti ah oo dhulal qalaad xoog ku qabsaday. Ismiidaamintu waxa ay abuurtaa faa’iidooyin istaraajiyadeed oo kooxaha argagixisada goobaha dagaalku aysan ku kasban karin. Sidaa daraaddeed falalka argagixiso dhammaantood waa tabab fuleynimo oo argagixisadu ugu hor tagaan iska hor imaadyada, xeelad dagaal oo cadawgooda khasaare ba’an lagu gaarsiiyo, shacabka lagu cabsi geliyo oo dacaayadna lagu kasbado. Olole kasta oo lagula halgamayo argagixisadana waa inuu fahankaas ka ambaqaadaa haddii la doonayo inuu guulaysto.
R/Wasaare Kheyre oo xil u magacaabay Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa Maye
Why this crisis is a turning point in history. By John Grey